Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, misintona horonantsary amin'ny Internet | Androidsis
Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, anio Airvidplay
Tongasoa eto amin'ny fizarana hafa an'ny Fampiharana mahavariana ho an'ny Android. Androany manararaotra ny zava-misy fa feno isika faran'ny herinandro, Te hampiseho fampiharana izay mikendry ny fialam-boly madio indrindra aho ary hahafaly ireo mpampiasa kokoa izany mpidoroka horonantsary.
Antsoina ny fampiharana Airvidplay y afaka mahita azy maimaim-poana tanteraka isika avy amin'ny Play Store de Android.
1 Inona no atolotry ny Airvidplay antsika?
2 Ahoana ny fampiasana Airvidplay?
Inona no atolotry ny Airvidplay antsika?
Airvidplay dia manolotra antsika ny fampiasa lehibe hahafahana misintona mivantana amin'ny fahatsiarovantsika ny fitaovantsika Android, izay horonan-tsary hitantsika amin'ny pejin-tranonkala rehetra. Izany dia hanampy antsika hijery azy io amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka avy amin'ny mpilalao tiantsika ary tsy mila fifandraisana tamba-jotra.
Airvidplay Mety amin'ny fampidinana atiny izany, ohatra, mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi toa ny tranontsika izahay. Io dia hahafahantsika mitahiry ny atiny amin'ny fitaovantsika irery mba hahafahantsika mijery azy amin'izay toerana tiantsika nefa tsy mila miankina amin'ny fifandraisanay data sy mandany megabytes amin'ny taha nifanarahana, hanampy antsika koa io mizara atiny miaraka amin'ny namantsika rehetra amin'ny alàlan'ny safidy namboarina "zarao amin'ny".
Ny zavatra tsara indrindra momba an'ity rindranasa ity dia ny hoe afa-misintona ny atiny heverinay fa mety dia mamela antsika hihoatra ny fameperana mahasosotra toa ireo izay hitantsika indraindray milaza amintsika "Ity video ity dia tsy mifanaraka amin'ny finday".
Ny kinova farany navoakan'ny fampiharana dia mampifanaraka tanteraka ireto manaraka ireto vavahadin-tsary-sary izay ahafahantsika maka mora foana ny horonan-tsary tadiavintsika rehetra:
Notsapaiko manokana izany You Tube ary ao Vimeo ary ny marina dia miasa fahagagana.
Ahoana ny fampiasana Airvidplay?
Ny fampiasana azy dia tsotra toy ny fitetezana lalana avy any aminay Mpanamory Internet ankafizinao, mandra-pahatongan'ny lalan'ilay horonantsary tadiavinay alaina ary kitiho ny safidin'ny mizara rohy mifantina amin'ny lisitra izay ny fampiharana Airvidplay.
Azontsika atao ny misintona ny horonantsary amin'ny sariohatra fizarana izay aseho amintsika eo amin'ny faritra ambony ankavanan'ny horonantsary voafantina. Manohy hatrany Download Link Hiditra amin'ny fisintomana ny atiny izahay mba hahafahantsika mijery azy na aiza na aiza ary tsy mila fifandraisana Internet, na dia fetsifetsy aza izany.
Ny fikafika dia ny mpizaha teratany no tiany Chrome Tsy afaka misintona ny atiny izy ireo satria ny ataon'izy ireo dia filalaovana mivantana, raha te hampidina ny atiny amin'ny fitaovanao ianao dia mila mampidina ny tranokala. Opera, koa misy maimaim-poana ao amin'ny Play Store.
Iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hitako misintona horonan-tsary mivantana avy amin'ny tranonkala ary avy amin'ny fampiononana atolotry Android anay.
Fanazavana fanampiny - Fampiharana Android mahatalanjona: Androany CoolAR Mix, Fampiharana Android mahatalanjona: Ankehitriny Big Skin launcher UCCW
Browser Opera misy VPN maimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tsy mampino ho an'ny Android, anio Airvidplay
Facebook 4.0 misintona APK mpanandramana kinova vaovao